Newsenepal:: खै के रै छ, यो केटी जातको मन बुझ्न पनि सारै गह्रो,केटी पट्याउने पनि कुनै सुत्र छ र ?
खै के रै छ, यो केटी जातको मन बुझ्न पनि सारै गह्रो,केटी पट्याउने पनि कुनै सुत्र छ र ?
विहान त्यस्तै ६ बजे तिर हुँदो हो मस्त निद्रामा थिएँ ।
कानै खानेगरी शिरानी मुनीको मोबाईलमा घन्टी बज्यो, म निद्राबाट विउझिँए । मननलाई नलाई आँखै नहेरी फोन उठाएँ साथीले गरेको रहेछ । ए कुशल ३ गते के छ त्यरो कार्यक्रम ? साथीले फोनमा भन्यो मैले अ नियमित त्यही त हो अफिस जाने कहानै जान छ र यार त्यही पनि विदा छैन् । मैले त अफिस विदा लिएको छु विरामी छु भनेर भोली ३ गते भ्यालेनटाइन डे हो भुलिस गर्ल फे्रन्डसको साथ घुम्न डेटिङ्ग जानु पर्छ म त चन्द्रागिरी जाँदैछु यार उनी सँग तेरो पनि केटी साथी भए लिएर हिँड है सँगै जाउ साथीले मलाई यसै गरी भन्यो ।
म अकमकै भएँ, के भन्ने के नभन्ने , त्यही पनि भने साथीलाइर्, साथी यार मेरो त केटी साथी पनि कोही छैन मैले चाहानेलाई मलाई चाहान्न यो मेरो कम्जोरी हो, मलाई त कस्ले पो हेर्छ र केटी घुमाउन त पैसा चाहिन्छ म सँग पैसा पनि छैन् केटी साथी पनि छैनन् तँ जा मोज गर साथी बेला यही हो, मैले साथीलाई यही भने
साथी रिसाउँदै भन्यो ह्या तँ मुला जहिलै यस्तै भन्छस जाबो एउटी केटी फसाउन सकेनस है,सँधै भरी यही भनिराख । यो मेरो आज विहान साथी सँग फोनमा भएको वार्तालाप हो । उसको लागि त केटी फकाउने काम दायाँ हातको खेल होला तर मेरो लागि भने सात समुन्द्र पैदल पार गर्नु जस्तै थियो, खै के रै छ, यो केटी जातको मन बुझ्न पनि सारै गह्रो,केटी पट्याउने पनि कुनै सुत्र छ र ? मैले म आफैलाई प्रश्न गरेँ ।
भ्यालेन्टाइन डे साच्चिकै काठमाडँौँमा अझ भनौँ सहरी क्षेत्रमा एउटा फेशनको रुपमा विकशित भईरहेको छ। दशैँ तिहारको भन्दा महत्व अहिलेको युवा पुस्तामा भ्यालेन्टाइन डे को चलिरहेकोछ । साच्चि यस्तो लाग्छ दशैँ तिहार आउँदा भन्दा वढी उमङ्ग युवा पुस्तमा यसैको वढी छ, कसले कसलाई प्रापोज राख्ने स्वीकार गर्ने, घुमाउन लैजाने दुनिया दिवाना ”
हामी नेपाली सँस्कृति चालचलनलाई भन्दा वढी विदेशी सँस्कृतिलाई अँगाल्न थालेका छौँ । विशेष गरी हामी युवा पुस्तमा यो समस्या वढी रहेको छ । हैन विदेशी सँस्कृतिलाई अँगाल्नै हुन्न भनेको पनि हैन अँगाल्नु पनि पर्छ तर हामीले अँगाल्नु पूर्व एक चोटी राम्रो सँग केलाउन सक्नु पर्छ । भोलीको भविष्य हाम्रो हातमा छ हामी भोलीको देश हाँक्ने बलियो कर्णधारहरु हौँ,हामीमा के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्ने गुण हुनु पर्छ । अनि बल्ल पो यस देशको समाजको अनि आमा बुवाको असल छोरा छोरी बन्न सकिन्छ ।
290532/13/2017 @ 19:14
Nirmal जी लेख्नुहुन्छ : प्रयास राम्रै छ .
Dale जी लेख्नुहुन्छ : तर के
Deepak जी लेख्नुहुन्छ : राम्रो त हो । तर